Liyuu Booliska Itoobiya oo dil iyo dhaawac u geystay dad Shacab ah | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Liyuu Booliska Itoobiya oo dil iyo dhaawac u geystay dad Shacab ah
Liyuu Booliska Itoobiya oo dil iyo dhaawac u geystay dad Shacab ah
Ciidamada Liyuu Boolis ee Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxaa ay dil iyo dhaawac u geysteen dad Shacab ah oo ku sugnaa deegaano ka tirsan dhinaca xadka ay Itoobiya la wadaagto Soomaaliland.
Ciidamada ayaa weeraray Goob ay ku sugnaayeen dadka Shacabka ah oo ah deegaanka Allay-baday ee gobolka Gabilay ee Soomaaliland,waxaana ay dileen hal ruux halka laba kale ay dhaawaceen.
Wararka laga helayo deegaanka Allay-baday ayaa waxaa ay sheegayaan in Arrintan ay ka dhalatay muran dhexmaray ciidamada iyo dad Rayid ah,taas oo keentay in Ciidamada liyuu Boolis ay dadka Shacabka ah rasaas ku furan.
Qofka rasaastaas ku geeriyooday ayaa meydkiisa waxaa loo qaaday Magaalada Jigjiga ee Xarunta Dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya halka labada ruux ee dhaawacmay la geeyey Isbitaalka deegaanka Allay-baday ee gobolka Gabilay ee Soomaaliland.
Goobta ay Ciidamada liyuu Boolis dadka Shacabka ah ku rasaaseyeen ayaa waxaa lagu soo waramayaa in Maanta ay tegi doonaan Mas’uuliyiin ka tirsan Soomaaliland si Xubno ka tirsan dowlad deegaanka ay kala hadlaan dhacadaas.
Horay ayaa Ciidamada liyuu Boolis ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa ay tacadiyo kala duwan oo dilal ah ka geysteen xadka Soomaaliya ay la wadaagto Itoobiya ee dhinaca Gobolka Galgaduud,taas oo keentay in dadka Shacabka ah la dagaalamaan.